हेर्नुहोस् स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक मोबाइल ? - TV Annapurna
मानिसको जीवनको अभिन्य अंग बनिसकेको मोबाइल फोनको रेडिएसनबारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ ? मोबाइलको प्रयोगमा अभ्यस्त हुनेहरुले रेडिएसनबारेमा पनि ज्ञान राख्नु जरुरी हुन्छ ।
यो रेडिएसन कयौँ किसिमको हुन्छ भने यसले नै मानिसलाई बिरामी पनि बनाउन सक्छ । आधुनिक जीवनशैलीमा मोबाइल फोन सबैभन्दा अहम बस्तु भइसकेको छ। हामी मोबाइलबिना एक मिनेट पनि रहन सक्दैनौँ । तर तपाईँले कहिले यी मोबाइल फोनबाट निकाल्ने रेडिएसनबारे जान्नु भएको छ ? जसले केवल वातावरणमा रहने पशुपंक्षी मात्रै होइन मानिसको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याउँछ ।
चार्ज भएका बेला बोल्न आवश्यक परेका बेला ईयरफोन या हेडफोनको प्रयोग गर्नुस् । यसले शरीरमा रेडिएसनको असर कम पर्छ । मोबाइलको रेडिएसनको मानक अधिकतम १.६ वाट प्रतिकिलोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर नेपाली बजारमा कुनै अनुगमनबिना जस्ता पनि स्मार्टफोन भित्रिने क्रम जारी छ । रेडिएसनको स्तर मापन नगरी नै नेपालमा चीन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जुनसुकै मोबाइल फोन धमाधम आइरहेका छन् । एजेन्सी
समानुपातिकमा दोहोरिने १७ नेता
महिनावारी रोकिनु अगावै गर्भवती भएको यसरी थाहा पाउँनुहोस्
सन्तान जन्मानका लागि महिला गर्भवती हुन्छिन्। कतिपय महिलाहरु चाहेर पनि गर्भवती बन्न सकेका हुँदैनन्। तर केही...
चिनियाँ संस्कृतिमा सर्पको मासुलाई विगत २ हजार वर्षदेखि प्रयोग गरिंदै आएको छ । चीनमा विशेष गरेर...
फेक एकाउन्ट समाप्त पार्न फेसबुकको एक्सनः पेज म्यानेज गर्न कठिन हुने
फेसबुकमा कतिपयले अरुको नाममा वा हुदै नभएको नाममा फेक एकाउन्ट बनाएर चलाईरहेका हुन्छन् । तर अब...
तौल बढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? -सात दिनमा पाँच किलो तौल घटाउने अचुक उपाय
शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलके तपाईको तौल घटाउनु छ? उपायहरु भन्दा शारीरिक तौल बढी...
हेर्नुहोस् कस्तो गाडी चढ्छन भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतका सरकार प्रमुख के छ फरक बिशेषता ?
संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको सुरक्षा पछिलो समय निकै चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ । बिभिन्न खाले...
पगानी जोन्डा एचपी बार्सेटा विश्वकै सर्वाधिक महँगो कार भएको छ । यसको मूल्य १३ दशमलव ५...
बलात्कारी सहर : जहाँ छन् एक तिहाई पुरुष बलात्कारी
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्गस्थित डिपलुस्ट सहरलाई दुनियाकै खतरनाक सहर भनिन्छ । त्यहाँ महिलाहरुमाथि बलात्कार हुनु सामान्य कुरा...
कहाँ बस्छन् विश्वका सबैभन्दा धेरै अर्बपति
एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति हुने मानिस अर्बपतिको सूचीमा सामेल हुन्छन्। यदि...
यी हुन सबैभन्दा बढि तलब खाने १० सिईओ जसको तलब १ करोड डलर
कुनै पनि कम्पनीको लागी कर्पोरेट जगत्मा नाम बनाउनको लागी सही रणनीतिको आवश्यक पर्छ । यस्तोमा कम्पनीको...
विश्वका १० चर्चित व्यक्तिका अनौठा बानी, हेर्नुहोस तपाईको को सँग मिल्छ ?
हरेक मानिससँग आआफ्नै बानी तथा स्वभावहरु हुन्छन् । त्यसकारण प्रत्येक मानिसमा फरकपना पाइन्छ । मानिसका स्वभाव...
काखी र मोजाको दुर्गन्ध, यस्तो छ हटाउने सजिलो उपाय
प्राय धेरै मानिसमा गर्मी होस् या जाडो जुत्ता तथा काखी गन्हाउने समस्याले ग्रस्त हुन्छन् । यस्तो...
मान्छेका के कुरा सन्नी लियोनी भनेकी भगवानले दिएकी यस्ती जादूमयी महिला हुन् जसलाई देखेपछि पशु र...
मानिसहरू आजभोली दैनिक पैसाको दौडमा दौडिन्छन् । थोरै सफल हुन्छन् भने अधिकांश निराशा बाहेक अरू केही...
बाल आश्रम, बृद्द आश्रम, बेसहाराहरुका लागि सहारा आश्रम, लोग्नेबाट हुने हिंसा वा अन्यखाले हिंसापीडित महिलाका लागि...
यी किशोरी जसको आँखाबाट र्झछन् ढुङ्गाका आँसु
आँसु भन्न बित्तिकै आँखाबाट निस्किने पानीको थोपा हो । तर यो दुनियामा एकजना यस्ती किशोरी छिन्...
तपाईमा पसिना गन्हाउने समस्या छ ? त्यसो भए यी ६ चीज त्यागौँ
हामी जे खान्छौँ त्यसको असर शरीरमा पर्छ । यसको असर हाम्रो शरीरबाट आउने गन्धमा अर्थात् सुगन्ध...
August 02, 2018 TV-Annapurna 0
यस्तो छ नेपालमा आत्महत्या गर्नेको तथ्यांक
नेपालमा अप्राकृतिक मृत्युका कारणहरूमध्ये आत्महत्याको तथ्यांक चिन्ताजनक रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पाँच...
अधिकांश नेपालीहरु यौन कार्यका लागी एकान्तमात्रै होईन अध्याँरो स्थानको समेत आवस्यकता महशुस गर्ने गरेका छन ।...
किन आइन् एकाएक चर्चामा धोनीकी श्रीमती साक्षी ?
भारतीय क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धोनीकी श्रीमति साक्षी सिंह विवादमा तानिएकी छिन् । भारतीय सञ्चार माध्यम एवंम् सामाजिक...
के तपाँईलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बारे जान्न मन छ ? यसरी हात हेरेर थाहा पाउनुहोस्
स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगले अनेक किसिमका संकेत दिइरहेका हुन्छन् । हातले पनि...
यस्तो छ हावामा चल्ने रेल, जसले २ सय यात्रु बोक्न सक्छ (भिडियोसहित )
चीनले नयाँ प्रविधिमा आधारित स्वचालित स्काई ट्रेन तयार गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । स्काई...
सुहागरातकै दिन बेहुलाको घरबाट सामान लुटेर दुलही फरार
कहिलेकाहीँ अनौठा घटना हुन्छन्, जसलाई हामीले पत्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । नेपालसँगै सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य...
July 27, 2018 Annapurna TV 0
नांगो फोटो प्रदर्शन गर्ने ठाउँ
मार्टिन बेल्चरले सन् २०१२ देखि सामाजिक सञ्जाल, ट्विटरको प्रयोग गर्न थाले। ट्विटरमा उनी विशेष गरी नांगो...
July 27, 2018 TV-Annapurna 0
मोटी महिलालाई नि:शुल्क प्रवेश
चीनको ताङ सम्राज्यसँग मेल खाने पार्क सञ्चालनमा आएपछि उक्त पार्कमा आउने मोटी महिलालाई केही समयका लागि...
मङ्गल ग्रहमा फेला पर्‍यो पानीको ताल
अनुसन्धानकर्ताहरूले मङ्गल ग्रहमा तरल अवस्थामा पानी विद्यमान रहेको प्रमाण फेला पारेका छन्। उनीहरूले फेला पारेर प्रस्ताव...
यस्ता छन् राजमाका फाइदाहरु
खानासँग दालका रूपमा होस् या चिउरा, मुराईजस्ता सुक्खा खानेकुराका साथमा राजमालाई विभिन्न तवरले पकाएर खाइन्छ ।...
July 23, 2018 Annapurna TV 0
महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? सुरक्षित कुन कुन दिन हो ?
फाइल फोटो महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन...
जीवनमा अनेकौँ सपना बोकेर जन्माउने र हुर्काउने आमा बा छोडेर पराई घर जान्छिन् छोरी । अनगिन्ती...
July 23, 2018 TV-Annapurna 0
नयाँ–नयाँ औषधिको अविष्कारका लागि होस् वा औषधिका हानिकारक पक्षहरुको खोजका लागि होस्, रोगका अनेकन पक्षहरुको अनुसन्धान...
भारतमा एक महिलाले जबरजस्ती आप्राकृतिक यौन सम्बन्धको आरोपमा पतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। विहेको...
रसिया विश्वकप प्रविधिको दृष्टिले उत्कृष्ट रह्यो । ब्राजिल विश्वकपको तुलनामा रसियन भूमिमा कम गोल भए ।...
रोचक जानकारी विश्वकप
ब्रिटिश गोर्खामा महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने
ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा सन् २०२० सम्ममा महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालीहरू दुई...
रोचक जानकारी समाचार
पाण्डेको उत्तेजक नृत्यसँगै विश्वकप फाइनल हेर्ने युवाहरूको सपना अधुरै
भारतीय मोडेल पुनम पाण्डेको उत्तेजक नृत्यसँगै विश्वकप फाइनल हेर्ने काठमाडौंका युवाहरूको सपना पूरा नहुने भएको छ।...
टन्सिल कस्तो रोग हो ? यस वाट वच्ने उपायहरु यस्ता छन्
टन्सिल प्राय केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लग्न सक्छ घाटी दुखने, थुक...
पार्टनरका यस्ता व्यवहारले सेक्स जीवनलाई अझै रोमाञ्चक बनाउँछ जानिराखौँ
हाम्रो समाजमा यौनको विषयमा कुराकानी गर्न वर्जित छ । अझै महिलाहरुले यौनको बारेमा खुल्ला भएर कुराकानी...
July 11, 2018 Annapurna TV 0
बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुहोस् ? स्वास्थ्यका लागि फाइदै फाइदा
श्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर,...
अहिलेको युगमा नरकको जीवन, महिलालाई खुवाइन्छ लोग्नेको जुत्ताको पानी
संसारमा महिला अधिकार र शसक्तिकरणका चर्का कुरा र महिलाहरु पुरुषसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका छन् ।...
श्रावणमा शताव्दीकै लामो चन्द्रग्रहण, कुन राशिलाई फाइदा, कसलाई हुन्छ हानी ?
२१ औं शताव्दीको सवैभन्दा लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । साउन महिनामा लाग्ने चन्द्रग्रहण महत्वपूर्ण...
July 08, 2018 Annapurna TV 0
उपरखुट्टी लगाएर बस्नुका बेफाइदा
हामीले दैनिक गरिरहेकै क्रियाकलापबाटै स्वास्थ्यमा कतै फाइदा त कतै नोक्सान भइरहेको हुन्छ । हिड्ने, डुल्ने, सुत्ने,...
महिलालाई कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्छ ? यस्तो छ अध्ययन
यौन जीव विज्ञानको प्राकृतिक आवश्यकता भएपनि यौन क्रियाका शैली भने समय समयमा परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ...
विश्वकपको भविष्यवाणी गर्ने बिरालोको मृत्यु
रुसमा जारी विश्वकपमा भविष्यवाणी गर्दै आएको चीनियाँ बिरालोको मृत्यु भएको छ। यसले चीनको सोसल मिडियामा निराशा...
असार २९ गते अनुप र शिल्पाको विवाह
अनुप र शिल्पाको विवाहको तयारी अन्तिममा पुगेको छ । असार २९ गतेबाट देश भर रिलिज हुने...
July 04, 2018 Annapurna TV 0
तपाईँ गर्भनिरोधक चक्की यसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? याद गर्नुहोस् ज्यानै जान पनि सक्छ
यौनको विषयमा उदार र जागरुक बन्न थालेपछि नेपालमा गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग बढेको छ । पछिल्लो समय...
संभोग गर्नुपूर्व यस्तो कुरा सोच्छन् महिलाहरु ?
सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन दुबै तिरबाट कोशिश हुन जरुरी छ । केटा केटी दुबैले चाहान्छ उनीहरुबीचको सम्बन्ध...
यी कारण हुन्छ महिनावारी गडबडी , कसरी जोगिने ?
सामान्य अवस्थाको महिनावारी २१ देखि ३५ दिनको बीचमा हुनेगर्छ । नियमित महिनाबारी अरु बेलाभन्दा अगाडि पछाडि...